» “ओलीलाई अर्को झ’ट्का ! एमालेले सिफारिस गरेका माधव नेपाल, सहित १४ जनालाई, कारवाही नगर्ने सभामुखको जवाफ” “ओलीलाई अर्को झ’ट्का ! एमालेले सिफारिस गरेका माधव नेपाल, सहित १४ जनालाई, कारवाही नगर्ने सभामुखको जवाफ” – हाम्रो खबर
“ओलीलाई अर्को झ’ट्का ! एमालेले सिफारिस गरेका माधव नेपाल, सहित १४ जनालाई, कारवाही नगर्ने सभामुखको जवाफ”
हाम्रो खबर संबाद दाता 170 Views
“काठमाडौ । नेकपा एमाले छोडेर नयाँ पार्टी समेत दर्ता गरिसकेका माधव कुमार नेपाल सहित १४ जनालाई कारवाही नगर्ने निर्णय सभामुख अग्नि सापकोटाले गरेका छन् । सापकोटाले नेकपा एमालेले १४ सांसदलाई कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने जवाफ दिएका छन् ।”
“निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ता भएको सूचना पठाएकाले सांसदलाई कारबाही नगर्ने निर्णय सभामुख सापकोटाले गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको पत्र भदौ ११ गते संसद सचिवालयलाई प्राप्त भएको बताए।”
‘एमालेले कारबाही गर्न भनेर पत्र पठाएको थियो। अब कानून अनुसार अर्को दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा अगाडि बढ्ने अवस्था नरहेको भनेर सभामुखले निर्णय गर्नु भएको छ’, योगीले जानकारी दिँदै भने।”
“नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत मागेपछि अनुपस्थित भएका १४ सांसदलाई ह्विप उल्लघंन गरेको भन्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। जसमा माधव कुमार नेपाल सहित १४ सांसद थिए । एमाले सांसदहरुले तत्काल सूचना टाँस गर्न सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेर धर्ना समेत दिएका थिए।”